दार्जिलिङ : इतिहास र निर्माण- विचार - कान्तिपुर समाचार
दार्जिलिङ : इतिहास र निर्माण
बाटो बनाउँदा हाम्रै पहाडे श्रमिकहरूले ढ्वाङ तान्नुपर्ने भयो। अति नै गाह्रो अनि उराठलाग्दो काम थियो रे । र, ढ्वाङ तान्नेहरूकी अगुवाचाहिँ फूलमाया गुरुङ्सेनी थिइन् रे जो ‘ब्ल्याक ब्युटी’ पनि कहलिन्थिन् रे ।
भाद्र ३०, २०७७ महेन्द्र पी‍. लामा
पहाडकी रानी दार्जिलिङको १८५ औं वर्षगाँठ बारम्बार माया, हर्ष र गर्वसाथ सबैले मनाउँदै छन् । सन् १८३५ मा सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भारत सरकारका अधिकारी एवं सेवार्थ सबैका लागि यो शान्त र शीतल पहाड सुम्पिएका थिए । विशेषतः मधेस खण्डमा प्रचलित बिमार–रोगबाट बाँच्न दार्जिलिङलाई एउटा मनले खाएको स्वास्थ्यलाभ केन्द्र बनाउने ध्येयले यहाँ बसोबास सुरु गरियो । पछि गएर दार्जिलिङ विश्वप्रसिद्ध हुन गयो ।
एउटा छोटो अवधिमा पनि यो पहाड प्राकृतिक सुन्दरता, संसाधन, विभिन्न संस्थान, चिया र सिन्कोना खेती, सानो रेल, तीर्थयात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र पर्यटन क्षेत्रमा संसारभरि नै चर्चा–परिचर्चाको विषय बन्न गयो ।
फर्केर हेर्दा, १८५ वर्ष पुगेको यो दार्जिलिङलाई पाँचवटा कालमा विभाजन गर्न सकिने रहेछ । यी पाँचैवटा काल अति नै घतलाग्दा र मर्मस्पर्शी मात्रै नभएर यस कालखण्डमा परेका घटना, स्मरण एवं मुद्दाहरू अध्ययन एवं अन्वेषणका विषय बनेका छन् । सन् १८३५ देखि १९४० सम्मलाई एउटा आधार र निर्माणको काल मान्न सकिन्छ । सन् १९४० देखि १९६९ को अन्तसम्म सुनौलो र सुवर्णमय काल भई अघि आउँछ । सन् १९८० देखि २००० सम्मलाई जागरुक काल मान्नैपर्छ ।
अनि त फेरि सन् २००० देखि २०२० सम्मको अवधिलाई निष्पट्ट अँध्यारो काल भने पनि हुन्छ । र, २०२० देखि आगामी दुई दशकसम्म दार्जिलिङ पुनः जागरुकता र नयाँ दिशानिर्देश कालभित्र पसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी काल विभाजनमा मतान्तर हुनु, व्यापक चर्चा–परिचर्चा, विवाद हुनु स्वाभाविक कुरो हो । इतिहासकारहरूले वैज्ञानिक तथ्य र तत्त्वलाई खोजेर, थ्योरी र कन्सेप्ट भित्र्याएर दार्जिलिङको यो छोटो ऐतिहासिक यात्राको कुनै समय निर्क्योल गर्ने नै छन् ।
सन् १८३५–१९४० को अवधिमा दार्जिलिङको आधार कसरी बसालियो र निर्माण कहाँ, कसले र कति गरे, यस लेखमा त्यति मात्रै तथ्यहरू संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दार्जिलिङमा प्रथम लहरमा बसी काम गर्नेहरूमा हुकर, हडसन, क्याम्पबेल, लोयड, आइटकिसन, एडगर, इडेन आदि थिए । वनस्पति विज्ञानका अग्रज जोसेफ हुकर अप्रिल १८४८ मा दार्जिलिङ पुगेपछि हडसनको ब्रायनस्टोन भन्ने घरमा धेरै समय बिताए ।
हडसनले नेपालमा अंग्रेजको रेसिडेन्ट भएर बस्दा जातजाति, भाषा, संस्कृति, प्रकृति आदिको पर्याप्त ज्ञान बटुलेका थिए । हुकर र हडसनको मित्रता यति गहिरो भयो, हुकरले एउटा इस्कुस–फर्सी प्रजातिजस्तै सब्जीको नाम नै हडसोनिया राखिदिए । इंग्ल्यान्डमा हुकरको अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध — कसरी बाँदरबाट बिस्तारै मान्छे भए भन्ने थ्योरीका प्रणेता — चार्ल्स डार्विनसँग थियो । दुईबीच दार्जिलिङ–इंग्ल्यान्डमा पत्राचार हुने गर्थ्यो ।
हुकरले पूर्वीय हिमालय क्षेत्रका झार–जंगल–फूल आदिलाई प्रथमपटक अध्ययन गरी व्यापक रूपमा प्रकाशित गरे । पछि इंग्ल्यान्डको क्यु बोटानिकल गार्डनका निर्देशक भएपछि दार्जिलिङ–सिक्किमका अनेकन् वनस्पति त्यहाँ सजाइए र उमारिए । हुकर र क्याम्पवेललाई सिक्किमका राजा छिगेल नामग्यालले सिक्किममा जंगल पस्न नदिँदा–नदिँदै पनि यी दुई सन् १८४९ मा सिक्किम पुगे । राजाले दुई जनालाई डिसेम्बर महिनाको चिसो मौसममा ४८ दिन कारावासमा थुनिदिए । अंग्रेज सरकारले आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि यी दुईलाई मुक्त गराइयो । यसबीच सिक्किमले आफ्नो दक्षिण भूभागका कतिपय क्षेत्र अंग्रेजलाई सुम्पनुपर्‍यो । यसरी नै तिनताकाका दार्जिलिङ जिल्लाका आयुक्त एडगरलाई अंग्रेज सरकारले व्यापार–वाणिज्य सुरु गर्नुपर्छ भन्दै तिब्बत जाने आदेश दियो ।
सिक्किम राजाको तिब्बतीहरूसँग गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि एडगर सिक्किम–तिब्बतको सिमाना पुगेर फर्के । उनले सन् १८७३ मा सिक्किम–तिब्बत सिमाना क्षेत्र आदिमाथि विस्तृत रिपोर्ट बुझाए । यसैका आधारमा पछि नथुला र जेलेपलाका व्यापारमार्गहरू खोलिए । दार्जिलिङको बुनियादी संरचना अति नै ठूलो सोच लिएर बिछ्याइयो । हिल कार्ट रोड–पंखाबारी रोडले मधेस र पहाडलाई सन् १८६० को दशकमै जोड्न सुरु गरिएपछि दार्जिलिङको सानो रेल सन् १८८१ मा पहाड पुर्‍याइयो । गिलानडर आरबुथनोट कम्पनीले निर्माण गरेको यो सानो रेलका इन्जिनियर फ्र्यांकलिन प्रेस्टिज थिए । सिलिगुडीदेखि अलिक मास्तिरको पहाडी इलाकामा पुग्दा प्रेस्टिज अघि बढ्नै सकेनन् । निराश भएर आफ्नी श्रीमतीसँग अब यो काम हुन सक्दैन, हामी असफल भयौं र इंग्ल्यान्ड फर्कनुपर्छ भन्दै घरभित्रै ओहोरदोहोर गर्न लागे । भनिन्छ, यसै बखत श्रीमतीले प्रेस्टिजलाइै भनिन् रे, ‘तिमी जस्तो प्रकारले ओहोरदोहोर गर्दै छौ, रेललाई पनि त्यसै ढंगमा बिस्तारै मास्तिर लैजानुपर्छ होला ।’ प्रेस्टिज रमाए, अनुहार उज्यालो भयो र नै जिगज्याग गर्दै रेलको लाइन बिछ्याउनमा सफल पनि भए ।
बाटो बनाउँदा हाम्रै पहाडे श्रमिकहरूले ढ्वाङ तान्नुपर्ने भयो । अति नै गाह्रो अनि उराठलाग्दो काम थियो रे । र, ढ्वाङ तान्नेहरूकी अगुवाचाहिँ फूलमाया गुरुङ्सेनी थिइन् रे, जो ‘ब्ल्याक ब्युटी’ पनि कहलिन्थिन् रे । फूलमायाले लोकगीत गाउँदै ढ्वाङ तान्ने र ठेल्नेहरूलाई हौसला दिन्थिन् रे । ‘आकाशमय ज्यानको नौलाखे तारा, एक तारा जूनसित; तिम्रो र हाम्रो हाँसखेल मात्र, युग काट्नु कोसित’ भन्दै गाउँथिन् रे, सबैले दोहोर्‍याउँथे रे । ‘हरर बरर ढ्वाङ तान्नु सरर, जानु छ मलाई दार्जिलिङ सहर’ भन्दै कमरसम्म लच्काउँथे रे । यी मार्गहरू आज पनि जीवित छन्; पहाडेहरूका आँसु, पसिना र रगत विक्षिप्त छन् यहाँ ।
अंग्रेजहरूले आफ्नो साम्राज्य बढाउन दार्जिलिङमा विभिन्न सामाजिक संरचनाहरू निर्माण गर्न लागे । महाकालको मन्दिर, गुम्बा, गिर्जाघरबाहेक विश्वप्रसिद्ध स्कुल र कलेज, अस्पताल र क्लब पनि । सँगसँगै चिया कमान र सिन्कोनाको खेती पनि । दार्जिलिङको चियाले विश्व खायो । दार्जिलिङ र चिया सँगसँगै बाँच्ने भए । चिया कमानहरू अंग्रेज कम्पनीहरूले चलाउँथे । साहेबहरू अति नै अनुशासित थिए । पहाडका श्रमिकहरूलाई छाला काढुन्जेल काममा लगाउँथे । नसुन्ने, अटेरीहरूलाई ‘हट्टा बाहिर’ को नाममा कमानबाटै निकालिदिन्थे ।
काम्ने ज्वरो मलेरियाले विश्व काम्न थालेपछि सबैले दार्जिलिङमा बनाइएको कुइनेन खान थाले । कुइनेन पनि विश्वव्यापी बन्यो । दार्जिलिङको चिया लिलाम गर्नलाई कलकत्ता र लन्डनमा लिलाम केन्द्र बनाइए । सेता मान्छे र पढेकाहरूले व्यवस्थापनको नाममा लिलाम केन्द्रमा अधिकारीको नोकरी पाउँथे । खटी खाने श्रमिकहरूचाहिँ आउँदा चार पुस्तासम्म कुल्ली नै भएर बाँचे । यसैले दार्जिलिङेले जमेर स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लियो ।
धेरै धनाढ्य, धार्मिक गुरु, शिक्षक आदि दार्जिलिङ आए । हंगेरीका सोमा डी कोरासझैं धेरै जना दार्जिलिङमै बिते । नोबेल पुरस्कार विजेता सेन्ट मदर टेरेजालाई सानो रेलमा बसी दार्जिलिङ जाँदा नै परमेश्वरले दर्शन दिँदै र गरिब, दुःखी, बिरामीहरूको सेवा गर्न आह्वान गरे । अंग्रेजले तिब्बत पस्ने एउटा घतलाग्दो बेसक्याम्प दार्जिलिङलाई नै बनाए । सन् १९०३–०४ मा तिब्बत आक्रमण गर्ने कर्णेल योङहसब्यान्ड मिसनको योजना पनि दार्जिलिङमै बनाइएको थियो । सन् १८६० मै दार्जिलिङमा म्युनिसिप्यालिटी बन्यो । र नै दार्जिलिङमा प्रशासनिक व्यवस्था अति नै सुदृढ भएर रह्यो, धेरै–धेरै दशकसम्म । नथुला र जेलेपलाका व्यापारमार्गहरू खोलिएपछि विकासको नयाँ मूल फुट्यो ।
कालिम्पोङ त तिब्बती चाँदीको पैसा दियाङले भरिपूर्ण भयो । धेरै नेवार कलाकारहरूले इलम देखाउने मौका पाए । खच्चडका लस्करहरूले तिब्बतबाट ऊन अनि भारतबाट तेल, चिनी, पेन, घडी, गाडी टुक्राटुक्रामा सबै बोकेर ल्याउने र लाने गर्थे । बीसौं शताब्दीको सुरुमै दार्जिलिङका पढे–लेखेका नेता र नागरिक समाजका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले यसलाई बंगालदेखि बाहिर राखेर एउटा छुट्टै प्रशासनिक जिल्लाको माग राख्न थाले । सन् १९१७ मा हिलम्यान एसोसिएसनका लेडेनला, खड्ग क्षत्री, डा. सितलिङ आदिले दार्जिलिङमा सन् १८६५ मा भोटाङबाट लिइएका जलपाइगुडी जिल्लाका अंशहरू गाभिनुपर्छ भन्ने माग राखे । र दार्जिलिङ, डुवर्स र असमलाई मिलाई नर्थ–इस्ट फ्रन्टियर प्रुभिन्स बनाइनुपर्छ समेत भने । पछि सन् १९२९ मा साइमन कमिसन र यसअघि सन् १९१५ मा मोन्टागु कमिसनलाई पनि भारतमा रहेका ३० लाख गोर्खाहरूका निम्ति छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग राखे । यसरी नै गोवर्धन गुरुङ, एचपी प्रधान, पीएम सुन्दर र एनबी गुरुङले यी मागहरू दोहोर्‍याएपछि भारतीय गोर्खाहरूले छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को मागको जग बसाले ।
सन् १९१३ मा खरसाङमा गोर्खा जनपुस्तकालय, सन् १९२४ मा सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर शर्मा अनि पारसमणि प्रधानद्वारा दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलन, सन् १९३२ मा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन र सन् १९४२ मा प्रथम राजनीतिक दल अल इन्डिया गोर्खा लिगको गठन गरियो । नेपाली भाषा–साहित्यको संवर्द्धन यसरी सुरु भयो दार्जिलिङमा । गोर्खा लिग पार्टी बनेपछि धेरै राजनीतिक चेतना अघि बढ्यो । सन् १८२० मै फोर्ट विलियम कलेजका प्राध्यापक जेए एटनले नेपाली व्याकरणमाथि पुस्तक लेखे र सन् १८२१ मा सेरामपुर मिसनले प्रथमपटक पवित्र बाइबललाई नेपालीमा अनुवाद गरी छाप्यो । सन् १९२७ मा बंगाल सरकारले नेपाली–पहाडिया–खसकुरा भनी वर्णन गर्‍यो । सन् १९०१ मा ‘गोर्खे खबर कागज,’ १९०२ मा ‘उपन्यास तरंगिणी,’ १९०६ मा ‘सुन्दरी,’ १९०७ मा ‘गोर्खा साथी,’ १९०८ मा ‘माधवी,’ १९१४ मा ‘चन्द्र,’ १९१८ मा ‘चन्द्रिका,’ १९२८ मा ‘तरुण गोर्खा’ र १९३५ मा ‘गोर्खा सेवक’ दार्जिलिङकै साहित्यिकहरूसँगको गठबन्धनमा बनारस, कलकत्ता, खरसाङ, शिलाङ र देहरादूनबाट प्रकाशित भए ।
अंग्रेज शासनभित्रै दार्जिलिङले सबै क्षेत्रमा विकास गर्‍यो । ह्याप्पी भ्याली चिया कमानका प्रबन्धकले सन् १९१२ मा अंग्रेजीमा लेखेको ‘दार्जिलिङ पोयम’ पुस्तकमा पर्वतकी रानीको अति सौन्दर्यमय वर्णन गरेका छन् । उनी लेख्छन्– ‘जन्मेपछि दार्जिलिङ हेरेपछि मात्र मर्न पर्छ,’ ‘प्रकृतिले ओढाएको अलौकिक वस्त्रले गौरवान्वित दार्जिलिङ’ अनि ‘ईश्वरको सबैभन्दा उत्तम सृष्टि दार्जिलिङ’ । अचम्मै–अचम्मको कुरो भयो यो निर्माणकालको दार्जिलिङमा । एसियाको सबैभन्दा पहिलो जलविद्युत् कारखाना सिद्रापोङमा सन् १८९६ मै निर्माण गरिएपछि नेपालको फर्पिङमा सन् १९११ मा यस्तो कारखाना बन्यो । कालिम्पोङमा म्याकफार्लानले गिर्जाघरदेखि सिन्कोना क्षेत्रको भव्य डाक बंगला पनि यसै बखत बनाए । नेपालका जंगबहादुर राणाको कोठी, कुचविहारका राजाको कोठीदेखि लिएर त्यति बेला नै आधुनिक ढंगमा बनाइएको गभर्नर हाउस विश्व पर्यटनको सूचीमै परे ।
दार्जिलिङको निर्माणकाल यति ऐतिहासिक छ, ठेलीका ठेली पुस्तकहरू लेखिएका भए पनि अझै लेख्न बाँकी नै छ । भारतीय गोर्खाहरूको जन्मथलो, कर्मथलो र पुस्ताथलो रहेको यो दार्जिलिङलाई फेरि पनि ‘माया छ बारम्बार’ । ‘जोबन गयो, बैंस त गएन’ भनेझैं दार्जिलिङको बैंस सजीव र उर्वर नै छ आज पनि ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ १०:३९
कोसी, कन्काई, कमला, वाग्मती र नारायणी जलाधारका केही स-साना सहायक नदीमा बहाव बढ्ने सम्भवाना
काठमाडौँ — मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अहिले देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरु र अन्य प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार प्रदेश १ को झापा आसपासका स्थानहरूमा भारी वर्षा भइरहेको छ । त्यस्तै मंगलबार दिउँसो र राति प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती स्थानहरुका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पनि मंगलबार कोसी, कन्काई, कमला, वाग्मती र नारायणी जलाधारका केही स-साना सहायक नदीमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाब भई सतर्कतातह पुग्न सक्ने बताएको छ ।
मंगलबार प्रदेश १, २, वाग्मती,गण्डकीको चुरे र तराई भई बहने केही स-साना नदीमा बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै महाशाखाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
आज कोशी,कन्काई,कमला,बागमती र नारायणी जलाधारका केहि स-साना सहायक नदीमा बहाब बढ्ने र केहिमा आकस्मिक बहाब भई सतर्कता पुग्न सक्ने,
आज प्रदेश १,२,बागमती,गण्डकीको चुरे र तराई भई बहने केहि स-साना नदीमा बहाव बढ्ने
चित्र १,२:नारायणीको बाढीपूर्वानुमान,२४ घण्टाको बर्षापूर्वानुमान pic.twitter.com/1BWNm39ZFp
— Nepal Flood Alert! नेपाल बाढी सूचना! (@DHM_FloodEWS) September 15, 2020
यस्तो छ महाशाखाले गरेको आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राति : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश , प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
भदौ ३१ गते (बुधबार)
दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राति : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
असोज १ गते (बिहीबार)
दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १ तथा वाग्मती प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राति : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १, वाग्मती तथा गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ १०:३८